Tatitra ara-tsosialy ao anatin'ny Google Analytics | Martech Zone
Tatitra ara-tsosialy ao anatin'ny Google Analytics
Alakamisy, Jona 14, 2012 Alarobia, Jona 13, 2012 Jenn Lisak Golding
Taorian'ny nahazoan'ny Google ny PostRank, nohavaozina ao anaty Google Analytics ny fanaovana tatitra ara-tsosialy mba hampidirana tatitra vaovao dimy. Ireo atiny ireo dia manome "atiny" isa mifototra amin'ny isan'ny fanehoan-kevitra voaray, rohy, fitanisana, bitsika, ary ny refin'ny media sosialy hafa. Ny tatitra tsirairay dia manome fomba fijery hafa momba ny zavatra ilaina amin'ny fanaovana tatitra ara-tsosialy / fanaraha-maso.
1. Tatitra topimaso, izay manasongadina ny fiantraikan'ny media sosialy amin'ny atiny. Ity tatitra ity dia mamaky ny atiny amin'ny alàlan'ny “Fifandraisana farany” sy ny “Resadresaka nifanaovana fanampiana.” Ohatra, azonao atao ny mahita ny fotoana farany nanarahan'ny mpampiasa ny atiny tamin'ny alàlan'ny sehatra media sosialy, ary ny mpampiasa farany dia niditra sy niova fo tamin'ny alàlan'ny sehatra media sosialy.
Ao anatin'ny Google Analytics, ny takelaka sosialy dia eo ambanin'ny safidy Standard Reporting.
2. Tatitra momba ny fiovam-po, izay ahafahanao mitazona ny tahan'ny fiovam-po manokana momba ny tranonkala na pejy. Ohatra, azonao atao ny manisa ny isan'ny fotoana aseho ny pejy "Misaotra anao noho ny fanehoan-kevitra", izay manome ny isan'ny fanehoan-kevitra bilaogy voaray. Amin'ny alàlan'ny fanitarana, milaza aminao ity hoe manao ahoana ny fampiroboroboan'ny bilaogy ny mpanjifa na ny mpamaky.
Ao amin'ny Google Analytics, tadiavo ny tatitra momba ny fiovam-po eo ambanin'ny loharanom-pifamoivoizana> sosialy> fiovam-po.
3. Loharano sosialy, izay ahafahanao mandrefy ny fahombiazan'ny atiny amin'ny mpanelanelana manokana. Ohatra, azonao atao ny mamantatra ny niafaran'ny doka iray tao amin'ny Facebook sy ny niafaran'ny doka mitovy na ny doka hafa tao amin'ny Twitter, sns. Avy eo, azonao atao ny manamboatra fantsona na fanovana manokana momba ny atiny mifototra amin'ity fahitana ity.
Ao amin'ny Google Analytics, tadiavo ireo loharano ara-tsosialy ao amin'ny takelaka fanaovana tatitra mahazatra eo ambanin'ny loharanom-pifamoivoizana> loharanom-baovao sosialy.
4. Plugins sosialy, izay mandrefy ny isan'ny fizarana azon'ny atiny, amin'ny fandrefesana amin'ny fomba mahomby ny lazan'ny bilaogy, infographic, na atiny hafa navoaka. Ity dia barometatra mahomby indrindra hamaritana ny lazan'ireo doka amin'ny sehatra media sosialy samihafa.
Ao amin'ny Google Analytics, tadiavo ireo tatitra fizarana ao amin'ny takelaka Standard Reporting eo ambanin'ny loharanom-pifamoivoizana> sosialy> Plugins.
5. Fandehanan'ny hetsika, izay fanitarana ny tatitra momba ny Social Plugins, manome fampahalalana misimisy kokoa toy ny URL ho an'ny atiny nozaraina, ny fomba fizarana, ny toerana sy ny fotoana nanaovana ny fizarana, ny mombamomba ireo olona nizara azy, ary ireo hevitra navoaka rehefa manao ny anjara.
Ao amin'ny Google Analytics, ny Stream Stream an'ny hetsika dia hita ao amin'ny takelaka fanaovana tatitra mahazatra eo ambanin'ny loharanom-pifamoivoizana> ara-tsosialy> loharano> kiheba mikoriana hetsika
Mora ny miditra amin'ireo tatitra ireo. Misoratra anarana fotsiny na miditra www.google.com/analytics/, ampio ny URL an'ny tranokala hotadiavina, alao ny kaody fanarahan-dia namboarina isaky ny pejy harahina, ary vonona handeha ianao!
Tags: ActivityGoogle Analyticshaino aman-jery sosialyTatitra ara-tsosialy
Didy 10 an'ny Pinterest ho an'ny orinasa
15 Jun 2012 amin'ny 9:34 AM
Raha mavitrika amin'ny haino aman-jery sosialy ianao (ary tokony ho izy!) Zava-dehibe ny fanaraha-maso ny fahombiazana. Ity dia afaka manampy amin'ny fitarihana ny paikadinao handroso. Ohatra, raha hitanao fa miovaova kokoa noho ny Facebook ireo lahatsoratra ao amin'ny Twitter, dia misy dikany ny hametrahana bebe kokoa ny ezaka ataonao any.